ဖောက်ထွင်း PVC လက်ကိုင်အိတ်
နေ့စဉ်ဘ၀တွင် စျေးဝယ်အိတ်များ၊ မုန့်အိတ်များ၊ လက်ဝတ်ရတနာအိတ်စသည်ဖြင့် စက္ကူအိတ်အမျိုးမျိုးနှင့် ထိတွေ့နိုင်သည် ။
ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပုံနှိပ်ခြင်းတို့သည် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ထပ်လောင်းတန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ရန်၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရန် အရေးကြီးသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။Designer တွေအနေနဲ့ Packagi နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ သိထားသင့်ပါတယ်...
21-11-28 ရက်နေ့တွင် admin မှ
စျေးဝယ်အိတ်က အရေးကြီးသလား ဒါမှမဟုတ် အိတ်ထဲက ထုတ်ကုန်က အရေးကြီးသလား။“Gen Z”—(အင်တာနက်ခေတ်တွင်မွေးဖွားသူများ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် “Gen Z” ကိုရင်ဆိုင်နေရသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်များအတွက်၊ အဖြေသည် ဖြစ်နိုင်သည်...
Jute B ကိုရွေးချယ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက...
ဂုန်လျှော်ပင်သည် အမျှင်များကို ရှည်လျားသောအမြှောင်းများဖြင့် အခြောက်ခံထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပင်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ရရှိနိုင်သော အသက်သာဆုံး သဘာဝပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ဝါဂွမ်း နှင့် တွဲ၍ အသုံးများဆုံး တစ်ခုဖြစ်သည်။အပင်များမှ...
စက္ကူအိတ်အသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး ၉
1. ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ပါ ပလတ်စတစ်အိတ်များသည် သဘာဝအန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ဥပမာအားဖြင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုအတိုင်းအတာကို ချဲ့ထွင်စေသည်။ပလတ်စတစ်အိတ်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘုံသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေရုံမက...
အဝတ်အိတ်များသည် ပလတ်စတစ်ထက် ဘာကြောင့် ပိုကောင်းသနည်း။အထည်အိတ်များသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပလတ်စတစ်အိတ်များထက် ပိုကောင်းသော်လည်း အကြီးမားဆုံး အကြောင်းရင်းနှစ်ရပ်မှာ-အထည်အိတ်များသည် ပြန်သုံးနိုင်သောကြောင့် ပစ္စည်းပိုသုံးရန် လိုအပ်မှုကို လျော့ကျစေသည်...
Franch Market အတွက် လက်ဆောင်စက္ကူအိတ်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏အချစ်ရေး ပြင်သစ်ဖောက်သည်များသည် ၎င်းတို့၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းစျေးကွက်အတွက် 40'HQ လက်ဆောင်စက္ကူအိတ်တစ်လုံးကို မှာယူခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံနှိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ပစ္စည်းအထူ၊ ...
Au စျေးကွက်အတွက် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော PVC အလှပြင်အိတ်များ
အလှကုန်လုပ်ငန်းမှ ဩစတေးလျမှ ဖောက်သည်တစ်ဦးသည် လက်ကိုင်ပါရှိသော 1*20GP PVC မိတ်ကပ်ဘူးများကို မှာယူခဲ့ပြီး အလှကုန်ပစ္စည်းများကို သိုလှောင်ရာတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသောကြောင့် အလှကုန်များ ပိုမိုများပြားလာစေရန်...
ကူဝိတ်အတွက် Holographic PVC စျေးဝယ်အိတ်များ ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကူဝိတ်ဖောက်သည်သည် ၎င်းတို့၏ပြည်တွင်းစျေးကွက်အတွက် 40'HQ ပမာဏ holographic PVC လက်ကိုင်အိတ်တစ်လုံးကို မှာယူခဲ့သည်၊ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းအထူ၊ ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်များ၊ l...
Usa စျေးကွက်အတွက် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော PVC သိုလှောင်အိတ်များ
admin မှ 21-02-10 ရက်နေ့တွင်
ကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောဖောက်သည်တစ်ဦးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှလက်ကိုင်ပါရှိသော 1*20GP PVC သိုလှောင်မှုအိတ်များကို မှာယူသည်၊ ၎င်းကို ၎င်းတို့၏ဆေးဆိုင်စျေးကွက်တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောသိုလှောင်မှုကိစ္စများ w...
20-10-10 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ကာတာဖောက်သည်သည် ၎င်းတို့၏ကော်ဖီဆိုင်အတွက် 40'HQ ပမာဏကော်ဖီစက္ကူအိတ်တစ်လုံးကို မှာယူသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံနှိပ်စက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းမှ ပို့ဆောင်မှုစီစဉ်ခြင်းအထိ တစ်နေရာတည်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
လိပ်စာ- No.688, Jiuxin Road, Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai, China.၂၀၁၆၁၅။